काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत थालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा मंगलबार बसेको पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठकमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भयो।
छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पार्टीले सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल पार्ने निर्णय सफल भएको समीक्षा गर्दै देउवाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकारको दाबी गर्ने निर्णय पनि गरको गरेको छ।
‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ। हामी माओवादी केन्द्र र जसपाको सहयोगमा हामी दाबी गर्छौं। त्यसका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छौं,’ बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने।
महतले सिंगो जसपाले एकढिक्का भएर निर्णय लिएर आउने प्रशस्त सम्भावना रहेको खुलाए। ‘माओवादी र कांग्रेस हामी एकै ठाउँमा छौं, हामीबीचमा कुनै समस्या छैन। अब जसपाको कुरा हो। जसपाको एउटा समूह तयार छ, अर्को समूहसँग छलफल भइरहेको छ, हामीले सिंगो पार्टीकै निर्णय लिएर सम्पूर्ण रूपमा सामेल हुन आग्रह गरिरहेका छौं, सिंगो जसपा आउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने।
यसैगरी महतले नेपाल पक्षलाई पनि मनाउने प्रयास जारी राख्ने बताए। उनले भने, ‘माधव नेपाल पक्षको पनि असन्तुष्टि रहेको छ। हामी उहाँहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयन्तलाई जारी राख्नेछौ।’ महतले तीन दल एक ठाउँमा भए बहुमत पुगिहाल्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
बैठकमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाललगायत सहभागी थिए।